Le yindlela imifanekiso i-Oukitel Encinci Y4800 eya kusivumela ukuba ijongeke | I-Androidsis
Sithethile malunga nokuqaliswa kwe-Oukitel elandelayo kwiiveki ezininzi. Sithetha ngeY4800 eNcinci, isiphelo sendlela ebesicwangciselwe oyena mncinci kwaye esinika eyona nto inomtsalane kuyo Ikhamera ye-48 mpx yesisombululo esingasemva kunye neArtificial Intelligence, Ikhatshwa yi-Android 9 kunye neprosesa ye-70-core MediaTek P7.
Ngelixa iphehlelelwe ngokusesikweni ngoJulayi 22 ngexabiso le- $ 199,99 (njengesithembiso sokwazisa), nantsi Uvavanyo lwekhamera ukuze ubone amandla esi siginali asibonelela ngawo kwifoto, Elinye lawona macandelo afanelekileyo kwesi sixhobo.
Kule vidiyo, apho isiphelo se-Oukitel siphinda sithelekiswa nomlingani wayo weXiaomi (iRedmi Qaphela 7), siyabona ukuba njani Enkosi kubukrelekrele bokwenza izinto ezibandakanywa yikhamera, Akukho mfuneko yokuba silungelelanise ukubonakaliswa okanye ibhalansi emhlophe, kuba i-Y4800 iyikhathalela ngokuzenzekelayo. Umbala weethoni ngumbulelo oqaqambileyo kwi-1/2-intshi ye-intshi, enika uluhlu olunamandla olusebenza phantse kuyo nayiphi na imeko.
Ikhamera ephambili ye-Oukitel Y4800 isinika isisombululo se-48 mpx enkosi kwisenzi esenziwe yi-Samsung, isivamvo esine-a ukuvula i-f / 1.8, esivumela ukuba sithathe imifanekiso enokukhanya okuphantsi. Ikhamera yangaphambili ifikelela kwi-16 mpx ngokuvulwa kwe-f / 2.0 kwaye yenziwe yiSamsung.
Ngaphakathi kwe-Oukitel Y4800 sifumana iprosesa ye-Mediatek P70, ehamba kunye I-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina. Ibhetri ifikelela kwi-4.000 mAh kwaye isixhobo silawulwa yi-Android 9.0.
Isiphelo esitsha esivela e-Oukitel siya kufumaneka Ukubhukisha kwakho ukusuka nge-22 kaJulayi ukuya kwi-29 kaJulayi ngexabiso leedola ezili-199 ngeBanggood. Nje ukuba ukwaziswa kokumiliselwa kuphele, esi sigxina siya kubizwa amaxabiso $ 249.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » IsiTshayina Android » Le yindlela imifanekiso i-Oukitel Encinci Y4800 eya kusenza ukuba sibonakale ngathi
Nika enye nge-blonde toupee ukukhaba okuhle ukuyivula kude kwiWonderPants: Rocky Rumble
Umncedisi kaGoogle kungekudala uza kuba nembonakalo entsha